အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ကြယ်ကိုစီပြီး လေထဲမှာ ရေကိုရှူတဲ့လူ
Posted by တီချမ်း at 3:27 PM
Rita May 26, 2009 at 8:17 PM
မိန်းမ တံခွန် လူရည်ချွန်က ကောင်းကင်တမွတ် ကြယ်ကိုဆွတ်လည်း မလွတ်စတမ်း ရမြဲလမ်းတည့်။
Rita May 26, 2009 at 8:18 PM
လူတံခွန်က ဘယ်ရှိတော့မလဲ။ လိုချင်တဲ့ပုံလေးတောင် Internet ကြီးရှိရက်နဲ့ google ကနေ ရအောင် မရှာနိုင်တာ။
ကိုရဲ May 26, 2009 at 8:27 PM
ရောက်တရ် တီ ရေ ။ ဖတ်သွားတရ် ။
အန်တီချမ်း May 26, 2009 at 8:42 PM
ဒေါ်ရီတာ ရေ ယောက်ျားတံခွန် တွေ က ရှိကိုမရှိတော့တာလို့ထင်တာပါပဲအေ
မိုးခါး May 26, 2009 at 9:54 PM
ရှားနေပါပီတီရေ .. တော်တော်ကိုရှားနေပြီထင်တာပဲ .. ရှိဦးမယ်တော့ မျှော်လင့်ပါတယ် ..း)
khin oo may May 27, 2009 at 1:16 AM
နန်းညီ May 27, 2009 at 12:50 PM
ညီညီ့ ကဗျာကြောင့် (ညီညီတင်ထားသော စိုင်းဝင်းမြင့်ကဗျာကြောင့်) အင်စပရေးရှင်းရတာဆိုတော့ မုန့်ဝယ်ကျွေးသင့်တယ်.. ဒါထက် ဘယ်တစ်ကြောင်းကြောင့်လဲဟင်
အန်တီချမ်း May 27, 2009 at 1:16 PM
ဒီလောက်သိသာနေတာကို တုံးပ ညုန်းမ ရယ်
ဘန်နာ က တီ တုံးလုံးလေးအိပ်နေတဲ့ပုံ အရင် ၀ါသနာပိုစ့်မှာပါတဲ့ပုံ ကို အလျားလိုက်လေးတင်ချင်တာ ခိခိခိ
wai May 27, 2009 at 5:01 PM
I am going back to Myanmar on Friday. After passingacouple of silly and lonely years andanumber of sleepless nights, I can go back to my old life. So, it is time to go back home. When I got homesick, depression, loneliness, Myanmar bloggers including you make me so happy. I feel that I am in Myanmar and listening the talkin' of my friends. From you posts, I got the knowledges and I pass everyday with your hot and cold feelings.
T Chan, i think you areanice guy and your career is great. I do adore what u r doing and when i come back agin to Thailand, I would like to visit your blog,or, perhaps, your home in Bangkok.
Wishing you possess the fabulous life and bright future.
Well, T Chan, Mr.Addy Chen, Ko Aung Myo, bye and see you again in November.
အန်တီချမ်း May 27, 2009 at 9:43 PM
ရေခဲတောင်ရေ တီ့စာတွေက ရှင့်အတွက် အားရှိစေတယ် ဆိုတာ သိရတော့
ပြောသာပြောတာ နော် ခုထိ ရှင်ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကျုပ်မသိရသေးဘူး
ရှင်ကလဲ ဖုန်းလေးတောင်မဆက်ဘူးနော် ခိခိ
ရော့အင့် တီ့ နံပါတ်
၀၈၄ ၆၇၁ ၁၁၃၅
Acacia May 27, 2009 at 9:52 PM
ကဗျာက သိပ်ကောင်းတယ် ကဗျာတွေ အမှန်ပြောရရင် ခံစားလို့ရဘူး နားမလည်တာပေါ့ ဒီမှာတော့ စာတော်တော်များများကို တော်တော်လေးကို ကြိုက်တယ် ဆိုကြပါစို့ အချစ်ဒဿနတွေရယ် ခုလိုကဗျာတွေရယ် အမြဲတမ်းဖတ်ဖြစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါ
Anonymous May 28, 2009 at 7:24 PM